China Precision Bearing Light nooca slewing Bearing oo aan lahayn warshad qalabka iyo soo saarayaasha |Wanda
Xuzhou Wanda sida soo saaraha wax soo saarka xirfadeed, waxaan leenahay awood wax soo saarka weyn, iyo wax soo saarka sanadlaha ah waa 68000pcs, size kala duwan ee 150mm in 5000mm, waxaan sidoo kale leenahay 3 dhirta si ay u dhigma shuruudaha macaamiisha '.
Waxaan leenahay tignoolajiyada horumarsan, oo lagu qalabeeyay tignoolajiyada xirfada leh, waxaanan leenahay qalab horumarsan oo aan ku siino adeegyada macaamiisha.
Xuzhou Wanda Slewing Bearing alaabteedu waa sax, cimri dheer.Waxaan leenahay nidaamka adeegga iibka ka dib oo dhamaystiran oo si firfircoon u xaliyaan dhibaatooyinka iibka ka dib macaamiisha.
Waxaan bixin karnaa adeegyo sahamin iyo cabbir bilaash ah, u qaabayn karnaa sawirka si waafaqsan sawir-gacmeedka macaamiisha, ama cabbirka si waafaqsan muunadaha macaamiisha.Sawirada waxaa la siin karaa macaamiisha si loo ilaaliyo.
Slewing Bearing waxaa si weyn loogu isticmaalaa mashiinada badda kala duwan, mashiinada dhismaha, excavator, wiishka xamuulka qaada, solar tracking, shaqada anteenada, mishiinka warshadaha fudud, iwm.
Waxa kale oo la bixiyaa dixiri nooc oo kala duwan, hal dixiri, dual dixiri, qalab helical iyo gooryaanka.
Pls nala soo xiriir si xor ah haddii aad wax codsi ah qabtid.
Hore: Nooca khafiifka ah ee wax lagu liqo oo leh qalabka dibadda (WD-061) ee mishiinada cuntada
Xiga: Giraan tolida saxda ah ee saxda ah ee qalabka Nucleic acid
wax lagu dilo marsho dibadda ah
Dharka tolida nooca khafiifka ah
garaacid miisaan yar
saxnaanta saxda ah
Gear dibadda ah hal saf oo kubbadda ah
XZWD WD-060 Taxanaha Bedelka VLI Iftiinka Taxanaha ah...
Nooca Iftiinka leh ee wax-ka-qabashada ee leh qalabka dibadda (...